Akhriso: Wasiirka Maaliyadda Puntland Cabdullaahi Siciid Carshe oo Baarlamaanka ka hor akhriyay Odoroska Miisaaniyadda Puntland 2018-ka[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
UJEEDO: Soo Gudbin Miisaaniyadda Dawladda Puntland ee sannadka 2018.
Anagoo tixraacayna Dastuurka Dawladda Puntland,Habraaca Maaliyadda iyo xeerarka Xisaabaadka ee Dawliga ah oo qaba in Sannad kasta xiligan oo kale la horkeeno Golaha Wakiiladda odoroska Miisaaniyadda sannadka soo socda.
Waxaa Sharaf weyn ii ah in Maanta ay taaiikhdu tahay 25,November 2017,aan halkaan idiinku soo gudbiyo odoroska Miisaaniyadda sannadka 2018-ka, Miisaaniyaddan oo ah Miisaaniyadda isle’eg, (dakhli iyo kharash), kana kooban sidaan hoos kuqoran :
Dahkiga Dawladda Hoose 7 dagmo
Mashaariicda Bangiga Aduunka
Mashaariicda Qaramada Midoobay.
Shaxda hoos ku qoran waxay muujinaysaa koror dakhliga oo kala ah sidan
Dakhliga Gudaha US Doller 450,000
Dakhliga Dawladaha Hoose 7 degmo US Dollar 2,547
Mashaariicda Bangiga Aduunka US Dollar 141,958
Mashaariicda Qaramada Midoobay US Dollar 812,238
Wadar Koror US Dollar 1,406,743
Maadaama aysan Miisaaniyadda sannad 2018 ka duwanayn Miisaaniyadihii ka horeeyay oo ahaa Miisaaniyaddo isle eg dakhli iyo kharash,shaxda hoose waxay muujinaysaa kharash u dhigma shaxda dakhliga ee kor ku qoran.
Mudanae Gudoomiye,Mudanayaal iyo Marwooyin.
Wasaaradda Maaliyaddu waxay ku dadaalaysaa(Insha allah) sidii loo heli lahaa odoroska Miisaaniyadeed sannadka 2018 iyo beekhaaminta Kharashka,waxay kale oo wasaaraddu codsanaysaa in lagala shaqeeyo Uruurinta Dakhliga.
Mudane Gudoomiye,Mudanayaal iyo Marwooyin.
Waxaan codsanaynaa Miisaaniyadda sannadka 2018, oo Golaha Wakiiladda hortaal in la gudbiyo.
Cabdullahi Siciid Caarshe